Home Wararka Xafiiska Rooble oo ay si dadban ula wareegeen siyaasiyiin mucaaradka ka tirsan
Xafiiska Rooble oo ay si dadban ula wareegeen siyaasiyiin mucaaradka ka tirsan
RW Rooble oo ilaa iyo hada haysto taageerada shacab iyo mida beesha Caalamka ayaa hada u muuqda in uu taageeradaas si fudud ku luminaayo ka dib markii xafiiskiisa ay si dadban ula wareegeen kooxo ka tirsan mucaardka.
Waxa ka jira magalaada Muqdisho hadal hayn iyo guux dadaweyne kaas aad u sii kordheya taas oo lagu sheegayo in RW Rooble oo ahaa qof dhexdhexaad ah, madax banaan uu haatan gaacanta u galay qaar kamida mucaaradka dalka. Waxaana taas tusaale u ah wasiirada uu magacaabay iyo kuwa la filayo in uu maalmaha soo socda magacaabo.
Waxa kale oo iyadana jira xogag rasmi ah oo sheegaya inuu RW Rooble uu wadahadal gaar ah la furay qaar kamida saraakiisha hogaamisa ciidamada badbaado Qaran si ay isaga ula shaqeeyaan, isla markaana ay u noqdaan awood ciidan oo uu kula dagaalo Madaxweynaha waqtiiga dhamaaday ee Farmaajo.
Dhanka kale waxa iyada laga dheehan karaa magaalada Muqdisho in RW Rooble uu ku sii aruurayo in uu talada ka qaato beesha uu ka dhashay ee Sacad oo kali ah, waxaadna ka dereemaysaa Xafiiskiisa in uu noqday mid ku sii koobnaanaya beesha uu ka dhashay.